Mkpuchi Grade Mica ntụ ntụ, ịchọ mma ọkwa Mica ntụ ntụ, pearlescent Mica ntụ ntụ - Huajing
Tumadi eme ezi nhazi nke na-abụghị dara ores, gụnyere eke mica, sịntetik mica, ọtọ mineral, wdg
Ngosiputa Ngwa - Natural Muscovite Mica Powder
Mkpuchi mkpuchi - Phlogopite Mica Powder
Nrụpụta ihe owuwu nke ụlọ ọrụ - Calcined Mica Powder
Plastic ọkwa - Sịntetik Mica ntụ ntụ
Plastic ọkwa - Phlogopite Mica Powder
About nkọwa ụlọ ọrụ
Lingshou Huajing Mica Co., Ltd., nke emere na 1994, nwere akụkọ ihe mere eme nke afọ 27 ruo ụbọchị. Ọ bụ mmepụta gbakwasara enterprise tumadi n'ime na-esi ọtụtụ nhazi nke nonmetallic ore gụnyere eke mica, sịntetik mica, ọtọ ịnweta wdg Huajing na-enye zuru ụwa ọnụ ngwọta dabere na arụmọrụ ịnweta elu-tech, elu-arụmọrụ ngwa, otu nke mica mmepụta ekpuchi dum ntụ ntụ klas usoro. Companylọ ọrụ ahụ esetịpụla ụlọ ọrụ nyocha na mmepe na mpaghara dị iche iche, nke bụ inye nkwado nkwado siri ike maka imepụta ụlọ ọrụ mmepụta ihe na isi ihe ịchọ mma.
afọ akụkọ ihe mere eme
afọ nke ihe ọhụrụ
Akwụkwọ akụkọ anyị, ozi kachasị ọhụrụ banyere ngwaahịa anyị, akụkọ na onyinye pụrụ iche.
Pịa maka ase
Huajing nwere ndị otu ọkachamara nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị otu 100 raara nye mmepụta na imepụta ngwaahịa dị elu site na mica na ngwaahịa ndị ọzọ ịnweta.
Companylọ ọrụ ahụ na-agbaso usoro nke ogo dị elu na mmepe na-adigide ma were sayensị na teknụzụ dị ka isi asọmpi ya.
Companylọ ọrụ ahụ nwere ụlọ ọrụ R & D abụọ na mpaghara dị iche iche iji nye nkwado nkwado dị ike maka mmepụta ụlọ ọrụ na ihe ịchọ mma.
Na mmepụta nke mica synthetic, ngwa nke mineral na-arụ ọrụ nwere uru ọrụ teknụzụ.
Ngwongwo ihe owuwu na mkpuchi
Ozi kachasị ọhụrụ banyere akụkọ anyị
Huajing na-agbaso usoro usoro nlekọta njikwa dị elu
Ya factory management anọwo na dị na ISO9001: 2015 quality management usoro, ISO14001: 2015 ...
152021 / Jenụwarị
Eziokwu banyere enviro ...
N’afọ ole na ole gara aga, e mepụtala ọtụtụ ihe ọhụụ n’ọhịa mara mma. Ọ bụghị naanị na anyị nwere ọtụtụ nhọrọ maka nlekọta anụ ahụ dị ọcha na nke na-adịghị egbu egbu, nlekọta ntutu na ihe ịchọ mma, mana anyị na-ahụkwa ụdị dị iche iche na-agbanwe uche ha maka ịmepụta ngwaahịa na-adigide n'ezie na mkpọ ...
Ihe nchoputa ohuru nke MarketsandResearch.biz weputara banyere ahia mica zuru uwa site na onye na-emeputa, mpaghara, ụdị na ngwa na 2020. Ọ bụ nchọpụta kachasị ọhụrụ na 2026 ma nye ikike maka ozi ahịa niile dị na ohere na ahịa ụwa. Direction of de ...
Mmepe na ngwa ...
Mica bụ aha izugbe silicate mineral, nwere njirimara nke mkpuchi, nghọta, nkwụsi ike ọkụ, nkwụsị corrosion, nkewa dị mfe na nkwụsị na juputara na elasticity. A na-eji ya eme ihe na ihe ịchọ mma, plastik, roba, ihe mkpuchi, corrosion ...